Kedu ihe dị ọhụrụ na iOS 13 | Akụkọ akụrụngwa
Gịnị bụ ihe ọhụrụ na iOS 13
Dị ka emebere ya, ụmụ okorobịa Cupertino gosipụtara n'ihu ọha ihe ụfọdụ ga-abụ isi ozi ọma nke ga-abịa site n'aka nsụgharị na-esote nke iOS na tvOS, watchOS na macOS. N'isiokwu a anyị na-aga na-elekwasị anya na ozi ọma na-abịa na iOS 13.
iPadOS, dika Apple kporo mbipute nke iOS nae ga-abata na nke ikpeazụ ya site na September, na-enye anyị ọtụtụ akwụkwọ ọgụgụ, nke ọtụtụ n'ime ha chọrọ ndị obodo. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe niile ihe dị ọhụrụ na iOS 13 na Apple gosipụtara na nzukọ WWDC inaugural, ana m akpọ gị òkù ka ị gaa n'ihu na-agụ ihe.
1 Gịnị bụ ihe ọhụrụ na iOS 13
1.1 Ọnọdụ gbara ọchịchịrị
1.2 Swipe iji pịnye na ahụigodo
1.3 Performance ndozi
1.4 Mail dee na usoro
1.6 Google Street View na-abịa Apple Maps
1.7 Jiri Apple banye
1.9 Igwefoto & Foto
2 IOS 13 Comp Kwekọrọ n'Ozizi Ngwaọrụ
3 Mgbe iOS 13 ọha beta malitere
Ruo ọtụtụ afọ, nke a abụrụla ihe ọzọ ndị ọkachamara chọrọ, karịchaa ebe ọ bụ na Apple wepụtara iPhone mbụ na ihuenyo OLED. Typedị ihuenyo a na-enwu naanị ndị na-egosi agba ndị ọzọ na-abụghị oji, yabụ na-echekwa nnukwu ike mgbe ngwa ndị anyị na-eji dakọtara na ọnọdụ a, ọ bụrụhaala na okirikiri dị oji kpamkpam, ọ bụghị ọchịchịrị ntụ dị ka ụfọdụ Ngwa .
Ọnọdụ gbara ọchịchịrị ga-adị na ngwa niile nke iOS dị ka Mail, Ndi ana-akpo, kalenda, ihe ncheta, ozi, egwu Apple, pọdkastị ... Ọtụtụ ndị mmepe bụ ndị nyere ntakịrị ihe karịrị otu afọ onyinye a na ngwa ha, ọnọdụ a ga-arụ ọrụ na akpaghị aka na ngwa ahụ mgbe arụ ọrụ. N'ime usoro ihe niile.
Swipe iji pịnye na ahụigodo
Ọtụtụ bụ ndị ọrụ iPhone ndị na-eji keyboard Google Gboard, ma ọ bụ ndị ọzọ nke atọ, nke na-enye ha ohere slide mkpịsị aka gị na ihuenyo iji dee. Na ntọhapụ nke iOS 13 ọ gaghị adị mkpa iji wụnye keyboard nke atọ iji nwee ike ime ya, ọ bụrụ na nke ahụ bụ isi ihe kpatara anyị ji etinye ya.
Na ntọhapụ nke iOS 12, Apple rụọ ọrụ nke ọma na arụmọrụ nke ngwaọrụ niile, karịsịa ndị mgbe ochie. Na iOS 13 o yiri ka Apple anọgidewo na-elekwasị anya na melite arụmọrụ a na ngwa ga-emeghe na ọkara oge.
Otú ọ dị, nke a arụmọrụ mma metụtara naanị na ngwaọrụ ndị a ga-akwado, ebe a na-ahapụ ma iPhone 5s na iPhone 6 na 6 Plus na mmelite ahụ, yana iPad mini 2 na ọgbọ mbụ iPad Ikuku.
Mail dee na usoro
Otu n'ime adịghị ike anyị na-ahụkarị na Mail mgbe anyị na-ede ozi ịntanetị, bụ na anyị enweghị ike ịhazi ederede ahụ. Nke ahụ ga - agbanwe na mwepụta nke ụdị ọzọ nke iOS 13, agagharị na - eche maka ndị ọrụ na-eji na-eji nwa afọ iOS email manager
Ngwa Apple Maps, nke Apple na-aga n'ihu na-anwa ịbụ ihe ọzọ na Google Maps, na-aga n'ihu na-akawanye mma kwa afọ. Na mbata nke iOS 13, atụmatụ nke obodo anyị gara na-enye anyị ihe zuru ezu, nke dị ugbu a, si otú a mee ka o kwe omume ịmata ebe anyị nọ na ebe anyị chọrọ ịga.
Google Street View na-abịa Apple Maps
Ọzọ novelties nke Apple map, anyị na-ahụ na-ekwe omume nke lee obodo site na ije ije ebe anyị nọ, dịka atụmatụ Google Street Street. Nke ahụ bụ, maka ugbu a, dị ka ọnụ ọgụgụ kasị ukwuu nke nkọwa nke ọrụ a ga-adị na United States, na-erute ndị ọzọ nke ụwa dịka nke 2019.
Jiri Apple banye
Apple chọrọ ka anyị jiri Apple ID banye maka ọrụ ngwa. Site na usoro a, anyị ga-egbochi onye nrụpụta yana / ma ọ bụ ọrụ inweta data n'aka anyị, dị ka a ga - asị na ọ na - eme mgbe anyị jiri ọrụ jiri Google ma ọ bụ Facebook.
Mgbe ị na-eji ọrụ a, Apple ga-ekenye anyị akaụntụ email pụrụ iche maka onye nrụpụta ma ọ bụ ọrụ iji kpọtụrụ anyị. N'ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na anyị kwụsị iji ọrụ ahụ anyị agaghị anọgide na-enweta mgbasa ozi ma ọ bụ ozi metụtara ya.
HomeKit bụ Apple n'elu ikpo okwu nke anyị nwere ike ijikwa ngwaọrụ anyị remotely, ma site na Siri iwu ma ọ bụ site na Home ngwa. N'ime ngwaọrụ niile akwadoro, onye na-enweta obere uru bụ igwefoto nche.
Na mbata nke iOS 13, Apple ọ ga-enye anyị ohere ịdekọ ihe niile na-eme n'azụ ese foto maka ụbọchị 10 na njedebe nke 200 GB, ohere a na-agaghị ewepụ site na ebe nchekwa anyị ma ọ bụrụ na nke anyị nyere ya dị elu.
Igwefoto & Foto
Na iOS 13, Apple ga-ekwe ka anyị gbanwee foto ọ bụla bara uru na anyị were dị ka nchapụta, saturation, lekwasịrị anya, iche ... dị ka a ga - asị na anyị jidere ya na RAW ma anyị na - edezi ya na ngwa ngwa Photoshop.
Ọbá akwụkwọ ahụ foto hGa-eji igwe mmụta iji gosi anyị foto kacha mma nke ụbọchị ọ bụla, ọnwa, afọ ma ọ bụ ọbụlagodi nke mmemme pụrụ iche. Na mgbakwunye, ọ ga-enye anyị ohere ịgbanwe echiche anyị nwere na ọba egwu, dịka anyị nwere ike ime ugbu a na ngwa Google Photos.
Na mgbakwunye, ọ ga-enyekwa anyị ohere tinye nzacha ma bugharia vidiyo ozugbo mgbe edezi, na-enweghị iji ngwa emere maka nke a dịka iMovie, dịka ọmụmaatụ.
Nhọrọ nhazi nke memojis nke sitere na iPhone X ha enweghị oke, ebe ọ bụ na anyị enweghị ike ịgbakwunye naanị agba ọ bụla nke lipstick ma ọ bụ onyinyo anya, mana anyị nwekwara ike ịhazi onyinyo nke ezé anyị, ọbụlagodi na anyị nwere eze ọla edo ma ọ bụ na anyị na-efu.
Ọ na-emekwa ka anyị nwee ike ịhazi ihu anyị nke ọma ọ bụrụ na anyị nwere mgbanaka n’imi, ire, ntị… Ọnụ ọgụgụ nke ịhazi ụdị ugogbe anya maka anwụ anyị na-eyi dịkwa oke elu. Onye ọ bụla achọghị ịmepụta emoji ngwugwu iji kesaa site na ngwa ọ bụla bụ n'ihi na ọ chọghị.
Ebe ọ bụ na e webatara CarPlay na eze, ụmụ okorobịa nọ na Cupertino elebara anya na ya. Na iOS 13, CarPlay na-enweta nnukwu ihu na ga-egosi ọtụtụ ihe ọmụma na ihuenyo na ruo ugbu a, ebe naanị ozi nke otu ngwa gosipụtara.
Ekele maka teknụzụ Bluetooth 5.x, anyị ga-enwe ike jikọọ otutu ekweisi na otu ngwaọrụ iji gee otu egwu ahụ, otu pọdkastị ... Ọzọkwa, ọ bụrụ na anyị na-eji AirPods, mgbe anyị natara ozi ederede, iOS 13 ga-agụ ya na akpaghị aka.
IOS 13 Comp Kwekọrọ n'Ozizi Ngwaọrụ
Dị ka atụmatụ, na n'ihi na ha bụ ngwaọrụ ochie, Apple ahapụla mmelite nke iOS 13 na iPhone 5s na iPhone 6, ngwaọrụ ndị anaghị erute 2 GB nke RAM karịa ma ọ bụrụ na ị nwere iPhone 6s na iPhone SE, ngwaọrụ ndị okenye ka nwere ike ịkwalite na iOS 13.
iPod aka na ọgbọ 7
iPad Ikuku 2
iPad Ikuku 3rd ọgbọ 2019
iPad Obere 4
iPad Obere 5
9.7-anụ ọhịa iPad Pro
10.5-anụ ọhịa iPad Pro
11-anụ ọhịa iPad Pro
12.9-inch iPad Pro (ọgbọ niile)
Mgbe iOS 13 ọha beta malitere
Beta ọha na eze nke iOS 13 ga-adị site na ọnwa nke July, ikekwe na njedebe, dị ka afọ gara aga. Ndị mmepe nwere ike iwunye beta mbụ nke iOS 13 site ugbu a, yana beta nke watchOS, tvOS na macOS.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Gịnị bụ ihe ọhụrụ na iOS 13
Nyochaa igwefoto wifi n'ime ụlọ Ezviz CTQ2C